Galweyn waa deegaanweyne ku taalo Gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay u dhowdahay magaalada Marka.waxaana daga qabiilada kala ah Digilmirifle oo ah dadka asal ahaan deeganka u deganaa waxa ka loo la dago biimaal iyo qubeys oo dowladii dhexe soo dejisey waqtiyadii abaaraha oo ay ugu horeysey dabadheer iyo Jareer, oo ku caan xaafadaha ka dambeeya webiga. waa degmo aad u barwaaqeysan waxeyna leedahay beero iyo sidoo kale bad ay dadka deegaanka kaga jilaabtaan kalluun. Miraha ay beertaan dadka deegaanka waxaa ka mid mooska, degmada labaad ee ugu soo saarka badan soomaaliya mara laga soo tago degmada Afgooye. waxey wax ka yar 5KM u jirtaa badweynta hindiya taas oo ay dadka deegaanka u sahashey iney si fudud uga soo jilaabtaan kalluun baddeedka. Beeralayda caanka ka ah gobolka sh hoose ayaa ka soo jeeda galweyn waxaa kana mid ah marwo
1"" faadumo cumar cali kumagac dheer faay mooge
Waa mamada  beesha hillibi darandoole mudulood  had iyo jeer lagu yaqaan xasilooni iyo deeqsi nimo
iyadoo uhurta deegaanka naf iyo maal si ay deeganka uxasilo
aqoonyahano caanka ah soomaaliya iyo weliba gobolka shabeelada hoose. Aqoonyahanada deegaanka waxaa ka mid ah:
- Dr. Jamaal Maxamed Barrow: waa wasiir kuxigeenkii hore ee wasaaradda arimaha dibada ee xukuumaddii Saacid iyo safiirkii hore ee soomaaliya U fadhiyey Dalka South Africa, Hadana waa safiirka soomaaliya u fadhiya Dalka Nigeria.
wuxuu wax kasoo bartey jaamacadda Umadda soomaaliyeed qeybteeda saxaafada, Takhasus ahaan darajadiisu waa PHD.
- Dr. Yoonis Muuse Cusmaan: waa halyeey aad looga qadariyo deegaanka iyo weliba dhamaan dadka gobolka dega. Wuxuu kasoo Qalinjebiyey Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed khaas ahaan Kuliyada lafoole. wuxuu door muhiim ah ka qaatey kor u qaadida waxbarashada gobolka, iyadoo uu xiligii abaartii caga bararkii loo magacaabey mid ka mid ah dadkii ugu waxqabadka badnaa ee kaalinta mugga leh ka qaatey la dagaalanka gaajadda iyo Jahliga.
Aqoonyahanada kale ee ku dhashey deegaanka Galweyn waxaa ka mid PROF:Fowzi Mohamed Baarow,oo ah prof iyo hormuudka kuliayada waxbarashada ee jaamacadda caalamiga ee Zanzibaar . sidoo kale waxaa ka mid ah aqoonyahanka magaalada golweyn DR: Anwar maxamed Baarow bari wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee Afrika, Waxa ka mid ah Said Ali baafo oo ah siyaasiinta maamulka koonfur galbeed hadana ah Lataliyaha Sare ee Wasaarada Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale waxaa ka mid ah ganacsadaha ugu weyn Golweyn horeyna xilal ugu soo qabtay Dowladii dhexe ee soomaali soo noqdeyna is ku dowihii wasaarada beeraha ee gobolka shabeelaha hoose Eng: Jeylaani Sheekh Xuseen sidoo kale Marxuum Mohamuud sheeqey yuusuf (Hoshmin), Marxuum Siid Cali Abdi Cumar, Marxuum siidow sheikh yuusjf Marxuum maxamed sheikh yuusuf, Maxamed Suufi, iyo kuwo kale oo tira badan,culimda xagga diinta fidinteeda iyo barideeda kugu yaqaano ee caanka ka ahaa waxaa kamid ahaa,sh.ibraahim naaney,sheekh cismaan, sheekh cumar sheekh cabdi dheere,iyo sh.Axmed. cabdi kiriin cali farax jeeri ,, maxamad cartan dhoore
dhalinyarada hada soo baxday ee reer golweyn waa ka mid ah Abdallahi Xuseen Shinbriroow, cabdulaahi maclin dooyoow, Cismaan yusuf adoomoow iyo Dr Yonis Muse Osman wiil uu dhaley Prf Abshir Yonis Muse oo Hada Ku sugan dalka South korea oo darajada master degree gana ka diyaariyey iyo waxaa kamid ah weel uu dhalay Ganacsadaha ugu weyn golweyn oo ah siyaasi Rajeynaya madaxweynaha mustaqbalka soomaaliya ahna qof leh Aragti dheyr iyo hami siyaasadiid Raadinayana xalka siyaasadiid ee shabeelaha hoose laguna maga caawo siyaasi Ayuub jeylaani Sheekh xuseen Ayuub jaziira iyo rag kaloo tira badan
Magaalada waxaa ku yaalla laba iskuul ,waxayna kala yihiin Golweyn Community Primary school iyo sh.cabdi dheere Primary school.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Golweyn&oldid=197522"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga badelay 14:17, 6 Diseembar 2019.